Namhlanje, xa ufika esitolo, awuyi kukumangaliswa kwesi siqhamo esingonakaliyo, nangona umhlaba welizwe lakwa-coconut yiziqithi zasePacific, iCaribbean, iHawaii, i-Indiya, i-Asia-mpuma ye-Asia, i-Southern California kunye neSouth Florida-zonke indawo apho iimozulu zitshatyalazi zilawula khona. Isundu samakhukhunathi sakhula ngexesha lama-dinosaurs kwaye libhekwa njengomnye wemithi ewusizo kakhulu emhlabeni. Iingcambu zaso kunye nemithi isetyenziselwa ukuveliswa kwefenitshala ekhethekileyo kunye nempahla yekhaya, iifayili zisetyenziselwa izitya zokulala izibhedlele kwaye zisetyenziselwa iinjongo ezisetyenzisiweyo: zenza imihlobiso nempahla. Ukususela kumagqabantshintshi enkqonkqo kwenza ukuba uphahla, kwi-nectar ye-inflorescences ithole ushukela (apho kukho izidyo ziselo ezigqithisiweyo zenziwe emva koko). Umxholo wendaba yethu yanamhlanje: "Iikononut: izakhiwo ezixhamlayo."
Ngoku i-coconut palm itholakala kwiindawo ezitshizileyo zombini i-hemispheres, zombini kwimeko yesimo. Isundu lesikhonkco sithanda indawo enhlabathini kwaye isoloko ikhula kwiindawo ezishushu. Kwixesha elidlulileyo, ukukhula kwalo kwakungokwemvelo: xa ikhukhunta ivuthwa, iwela phantsi kwaye ngamanye amaxesha islayidi emanzini. Ikhukhunathi inokuthi ijikeleze malunga neenyanga ezintathu, iphula amawaka eekhilomitha. "Ukubhukuda" elunxwemeni, kunokuthatha ingcambu kwisanti, kuba sele sele ihluma emanzini.
Isundu lesikhonkco sifinyelela kwiimitha ezingama-30 ngokuphakama, iguquguqukayo kwaye ilula, isithsaba esikhulu, amaqabunga angamaqabunga, ajikeleza elwandle. Uthanda umoya omanzi kunye nemvula enkulu. Omnye umthi unika amanqwanqwa angama-60 ukuya kuma-120 ngexesha ngalinye. Ukuqokelela ama-nuts ngokuvuthiweyo okanye inyanga ngaphambi kokuvuthwa. Isiqhamo sesundu sesantsi ixesha elide - kwiinyanga ezili-10 ukuya kwezi-12.
Ikhukhamba inomfanekiso ovalwe ubude be-15 - 30 cm, ubunzima obuyi-1.5 ukuya ku-2.5 kg. Uluhlu oluqinileyo lwangaphandle lubukeka ngathi i-shell shell, ebizwa ngokuthi i-exocarp. Ngaphakathi kwe-nut-white mass - endocarp, 12 mm ubukhulu kunye ne-endosperm. I-Endosperm yinto yamanzi kakhukhunathi, i-liquid and transparent. Ngethuba lokuvuthwa kwe-fetus, lijika libe ngummulsion wemibala emhlophe, ize ikhule kwaye ilukhuni. Phezulu kwesiqhamo kukho iintonga ezintathu, kwaye ukuba ziyakwenza imingxuma kuyo, unokufumana amanzi okukhukhuza ngaphandle kokuvula isiqhamo. Ngamanye amaxesha amanzi ekhukhunathi kunye nobisi lwekakhukhunathi bayadideka. Ubisi lweKoconut lukhishwe kwi-pulp yekakhukhunathi, imhlophe kwaye iyahluke kwintlekisa kumanzi kakhukhunathi. Le yobisi kulula ukuyilungisa ekhaya. Ngenxa yoko, i-coconut pulp ixutywe kwi-grater, ithululelwe ngamanzi kwaye emva kwemizuzu engama-20 icinywe nge-milk-milk exotic milk coconut isilungele. Olu lwakhiwo luqulethe amaninzi kunye neeshukela, ngoko kudla ukuba kusetyenziswe ukwenza isobho kunye neesekese.
Ikhokoni inamachiza asebenzayo: iqukethe iivithamini B no-C, i-saleral mineral, i-sodium, i-calcium, isinyithi, i-potassium, i-fructose, i-glucose kunye ne-sucrose. I-microelements ezitholakala kwi-pulp nobisi zinempahla yokubuyisela, ukuphucula umboniso, isetyenziselwa ukuphatha isifo sohudo kunye nekholera. Ikhonkco inceda ngezifo ze-genitourinary system, i-beriberi, kunye neengxaki zexhala, iyakhathaza ukungabi namandla kwaye inokunceda ukwandisa isixa sembewu. I-coconut oil ilawula iswekile egazini kwaye iphucula ukukhutshwa kwe-insulin, ekhusela isifo sikashukela, isetyenziswa ngokunyanga kwiinkonzo zesifo seentso.
Ioli yococonut isetyenziswa kakhulu kwi-cosmetic industry: ama-creams, masks, shampoos, i-rinses ene-oily-absorbing oil and non-sticky texture. Ubisi olusekelwe kwikonkco lwenza ulusu lube lukhuni kunye nethenda, lunomphunga omnandi kakhulu. Ioli yococonut isetyenziselwa zonke iintlobo zesikhumba. Xa isetyenzisiwe, isalathisi esingabonakali sakhiwa esilondoloze ibhalansi yamanzi ngenxa yokunciphisa, ukuphucula kunye nesondlo kunye nokukhusela i-epidermis kwimiba yendalo. Ngako oko, ukubuyisela isikhumba esiqingqiweyo nesibandayo ebusweni, le ngxube ayinakwenzeka. Ekubeni ioli yekakhukhunathi ine-anti-inflammatory and refreshment effect, inokukunceda isikhumba esichukumisayo nesiqhambileyo ukuba sikwazi ukujamelana nokubamba nokubomvu ngokulula.
Sebenzisa ioli yekakhukhunathi kubini kunye nomzimba. Ixhasa ngokuthe ngqo ukunyaniseka kunye nokunyaniseka kwesikhumba, ilulaza isikhumba kwaye igcina ithoni epheleleyo. Akusiyo into yokuba iPentral kunye neMzantsi Melika sele isetyenzisile ioli ngeenkulungwane ezininzi njengegosa elivuselelayo. Ngenxa yeemeko zokukhusela ioli, iyasetyenziswa ngokubanzi kunyango lokutshisa kunye namanxeba. Yaye ukuba ixutywe ne-sunscreen okanye emulsion, uya kufumana isiluleko esingasetyenziswa ngaphambi nangemva kokushona kwelanga.
Ucocekisi ngokudibanisa neoli yekakhukhunta ifanelekile ukususa ukwakheka ebusweni nasweni lamehlo. Ngenxa yeempawu zayo ze-hypoallergenic, i-oyile isetyenziselwa ukunyamekela ulusu lolutsha. Akugcini nje ukunciphisa ulusu lomntwana, kodwa luqinisa amandla omzimba walo.
Ikhokoni isetyenziswa ngokubanzi ekuphekeni, zombini kwifomu elitsha nangomileyo, ngohlobo lwe-coconut shavings. Izivumba zivame ukusetyenziswa kwi-confectionery ukuhlobisa ii-cookies, iigake kunye ne-pastries kunye ne-additives kwi-yoghurts, i-ice cream, i-salads. I-pulp yekakhukhunathi ayinayo i-cholesterol, ngoko isetyenziselwa ukucima inyama kuphela, kodwa neentlanzi. Akukona nje kuphela ukunika ukunambitheka kwayo okungavamile, kodwa kusenayo i-fat and aromas of spices. Ngenxa yoko, ii cubes zekotonti zifanelekile. Ukongezelela, bahombisa ngokugqibeleleyo isidlo, bayamnandi ukunambitha baze bashiye i-aftertaste engavamile emlonyeni wakho. "Bahlaselwa" njengamaqhezu aqhelekileyo, i-vodka iyanamathela kubo.
Ioli yekhononi yinxalenye yezithako xa upheka i-margarine. Yongezwa kwiisobho, iisoso kunye nenhlama, enika ubuninzi kunye nesinambitha kwisitya. Ukususela kubisi lwekakhukhunathi, i-cocktails eziqhakambisayo kunye neziphuzo zokuphucula impilo zilungiselelwe. Yiloo nto, i-coconut, eneempawu ezibonakalayo zibaluleke kakhulu!
Iipropati eziwusizo zeeparaji
Ingoma entsha ngo-Olga Buzovoy "Ukuvakala kwengxolo" ibangele i-scandal in Instagram
Izilwanyana zomntu zokulila
I-pear ephikisiweyo kunye nefronta
Khangela ihlabathi elinamehlo amancinane
I-Biography yomdlali wePoland uMichal Zhebrovski
Amatshontshi ashushu kwi microwaves